Sei Coinbase ari kupomerwa overloading ari Bitcoin zvakarukwa uye sei SegWit mabasa ? - Blockchain News
Kukadzi 12, 2018 arun
Uye vangani Coinbase mainjiniya inodiwa kusuma SegWit.
On February 5, ari Coinbase Cryptocurrency Exchange akagovera Tweet, achizivisa kuti “kukura Chikwata iri pakupedzisira Danho yekuedzwa SegWit”, uye “kutumira nokutambira BitCoins pamwe SegWit rutsigiro achava zvinowanikwa shomanana”.
Coinbase akazivisa basa SegWit mukuvamba December gore rapera, kupindura mumwe uchibvunzwa mibvunzo kubva vanoshandisa “vangani Coinbase mainjiniya inodiwa kusuma SegWit.”
On December 16, Coinbase mutevedzeri wapurezidhendi Dan Romero akabudisa mumhanyi ari pamutemo Coinbase Blog, achizivisa kuti pakatanga SegWit riri vakaronga kuti 2018, uye panguva iyoyo chikwata chiri “kushanda yakachengeteka Implementation pamusoro SegWit.” Romero rinosimbisa kuti “ari panzvimbo yokutanga – chibatiso uye vakarongeka basa Exchange”, uye asingagoni kutaura pamusoro chaizvo mashoko.
zvisinei, pamusoro nefungu December “Bitcoin Kukara”, vanoshandisa Kusagutsikana ikakura nemambure wacho busyness: exchanges, kusanganisira Coinbase uye GDAX, havana kukwanisa kukunda rekodhi vade uye akaenda is, mari uye kutengeserana kusimbisa nguva vakanga vachiwedzera. In pemwedzi January, Vatengi akatuma Coinbase CEO Bryan Armstrong chikumbiro kuti inounganidzwa kupfuura 12,000 vakasaina, vachidanidzira kuti rutsigiro SegWit sezvo kuchikosheswa 2018. Jameson Race, aitungamirira injiniya of BitGo crypto chikwama, Akadana Kuramba kwakaita Coinbase mabasa: “Hakusi zvakawanikwa kuti chikonzero chinokosha pamusoro overloads muna Bitcoin pomumbure kunokonzerwa zvakadai dzakakurumbira mabasa sezvo Blockchain.info, Coinbase uye Gemini, izvo inefficiently kushandisa misa nzvimbo. Kana usingade kupa ichi, regai kuushandisa. ” Armstrong zvakare akabvuma mhosva, vachiti “Coinbase ari kushanda ari packetizing kwema, SegWit uye zvimwe nzira kubvisa kurega kunotanga ari pemambure.”
SegWit ndehwokuti kugadzirisa dambudziko scalability nokuderedza kukura kwema. The dzakati yakanga dzataurwa nokuda yokuvaka kuti Blockstream Peter Wellle, uye softphone kuti zvibvire kushandiswa SegWit, kwakaitika pomumbure Bitcoin muna August gore rapera. Pakati mabasa nechekare kuti kutsigira unyanzvi – wallets Ledger, ngozi, Nesirivha uye Samourai Wallet, uyewo Crypto-exchanges HitBTC, ShapeShift uye Bitstamp. Kuti tinzwisise kuti SegWit anobatsira Bitcoin Network, zvakafanira kuti kufungidzira panguva nyore voparadza nezuva purogiramu bitcoin-kwema kuti vofamba Bitcoin pomumbure dziri “mashoko omumasherufu”, uye avo nderechokwadi uye kururama vari atariswa nodes. Kana zvose nodes dzinobvumirana kuti kutengeserana wakarurama, ipapo mumwe nekubvirana zvasvika. The kutengeserana pacharo rine zvikamu zviviri: chiyamuro uye goho – “chiyamuro” uye “mbudo”, idzo mugove wokutanga ndiye anokonzera “Kuzarura”, ndiko, pakuwana BitCoins (uye rine mashoko pamusoro yatumira), uye yechipiri – nokuti “nokukiya” yevanoda ramangwana ainge atumirwa. The chiyamuro date chinewo siginicha certifying kuti tsamba yacho private uye voruzhinji makiyi.
SegWit Michina (zvakaparadzaniswa Witness) rinotsemuka kuti kutengeserana muzvikamu zviviri uye Transfers ari siginicha (“chapupu”) zvaanofanira “kiinura” kuti vakawana BitCoins, kusvikira pakuguma kutengeserana, kunze huru misa. In iyi, huru chikwata rine mashoko pamusoro wacho uye yatumira, uye “chapupu” rine mumanyoro uye zvikamu, ndiko, mashoko zvinokosha kuzosimbisa kutengeserana, asi zvino haazombofi kushandiswa. Kufungisisa kuti zvikamu unehanya 60% of kutengeserana vhoriyamu, kuzviparadzanisa nevamwe vavo yekudyidzana kunoderedza chinogumbura saizi, nokudaro vachiwedzera nemambure bandwidth uye kuderedza mari mutengapwe mhosva.
Kurega kuchengeteka ...
Previous Post:Coincheck inozivisa refunds kutanga svondo rinouya
Next Post:Mario Draghi: Bitcoin chengetedzo haisi ECB kuti basa
these details anoti:
Chivabvu 3, 2018 pa 7:15 AM